China Solar Ground Light 8 LED Solar Garden Light Waterproof Outdoor Solar Disk Light for Pathway Yard Walkway Patio Lawn Path Ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya | Kasem
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ 8 Igwe ọkụ ọkụ nke anyanwụ na-egbochi mmiri n'èzí ọkụ diski anyanwụ maka Pathway Yard Walkway Patio Lawn Path
Okpomọkụ agba (CCT): 2700K (Ọcha na-ekpo ọkụ dị nro)
Voltaji ntinye (V): DC 6V
Nrụpụta ọkụ oriọna (lm/w): 100
Akwụkwọ ikike (Afọ): 1-Afọ
Ọrụ ngwọta ọkụ: ọkụ n'èzí
Ogologo ndụ (awa): 30000
Oge ọrụ (awa): 30000
Ụdị: Igwe ọkụ ọkụ ọkụ
Nọmba nlereanya: KADC-02
oriọna na-egbuke egbuke Flux(lm): 28
Asambodo: ce, RoHS, EMC, LVD, FCC
Aha ngwaahịa: ìhè ìhè anyanwụ led
Ihe: igwe anaghị agba nchara + PP
Agba: Ọcha Ọcha / Ọcha
Ogwe igwe: 2V 120mAh
Batrị: Ni-Mh 600mAh
Igwe ọkụ LED: 8 LED
Ọrụ: ọkụ n'èzí nke anyanwụ
[Ọkụ ọkụ anyanwụ na-egbuke egbuke] Ọkụ ubi ọ bụla nwere ọkụ 8 LED nwere batrị 600mAh arụnyere n'ime ya. Ịchaji maka awa 6-8 nwere ike inye ọkụ maka awa 8-10. (ọkụ ọkụ nke anyanwụ na chaja na oge ọrụ ga-adịgasị iche dabere na ihu igwe)
[Ọ dị mfe ịwụnye] Mgbe ị na-eji, naanị mepee mgba ọkụ n'okpuru mkpuchi nke oriọna e liri ma tinye ikpo ahụ n'ime ala. Ọkụ n'ụzọ ọdịdị ala na-agbanye na-akpaghị aka n'abalị wee gbanyụọ ozugbo n'isi ụtụtụ!
[Ihe ndozi dị n'èzí adịchaghị] Enwere ike iji ọkụ ụzọ ndị a iji chọọ steepụ gị, okporo ụzọ, patios ma ọ bụ akwa ifuru iji gbakwunye mmetụ nke ịma mma.
[Ọkwa dị elu nke enweghị mmiri] oriọna ọ bụla e liri anyanwụ na-eji ihe mkpuchi ọkụ dị elu, shei oriọna igwe anaghị agba nchara, dabara maka ojiji n'èzí, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị maka mmiri ozuzo, snow, ntu oyi, wdg.
[Ọrụ Ndị Ahịa & Akwụkwọ ikike] Kasem na-enye ọrụ ndị ahịa ahịa dị mma maka ọkụ diski. Ọ bụrụ na afọ ojujughị gị na ọrụ a maka ihe ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enyere gị aka dozie nsogbu ahụ n'ime awa 24.
Gbanye/ Gbanyụọ akpaghị aka
Ọkụ ndị a na-agbanye na-akpaghị aka mgbe ọchịchịrị gbara, yabụ ị ga-enwe ọkụ maka ụzọ gị mgbe niile, ma ọ bụ mee ka ubi gị maa mma.
IP65 mkpuchi mmiri
IP65 waterproof, mere nke igwe anaghị agba nchara ihe nwere ike mechie nke ọma nke kwesịrị ekwesị n'èzí. Karịsịa n'ụbọchị mmiri ozuzo.
EZIOKWU NA ỌRỤ
Nhazi ike anyanwụ. Batrị Ni-MH 600mA arụnyere n'ime ya, nwere ike ime ka ọkụ dị ihe dị ka awa 8 ka batrị chajịchara nke ọma. Ọ nweghị ntinye eriri USB ọzọ achọrọ.
AHA Ogige ọkụ nke Led Solar
Ihe NO. KADC-02
Gbanwee Gbanyụọ/ Gbanyụọ ma ọ bụrụ na ọkụ na-agbanye na akpaghị aka n'abalị ma gbanyụọ n'abalị
Agba ọkụ ọcha
Igwe ọkụ anyanwụ 2V 100mA
Batrị 1.2V 600mA
Ihe onwunwe metal + plastic
Oge Nchaji karịa 8 awa
Oge ọrụ 8-10 awa
Nha ngwaahịa Ogologo: 11.5CM: 13.5cm
Igwe ọkụ chọrọ 17 LED (gụnyere)
Q1: Na-eche ma ị na-anabata obere iwu?
A1: Echegbula onwe gị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Iji nweta ọtụtụ iwu ma nye ndị ahịa anyị ọtụtụ convener, anyị na-anabata obere usoro.
Q2: Ị nwere ike izipu ngwaahịa na obodo m?
A2: N'ezie, anyị nwere ike. Ọ bụrụ na ịnweghị onye na-ebugharị ụgbọ mmiri gị, anyị nwere ike inyere gị aka.
Q3: Ị nwere ike imere m OEM?
A3: Anyị na-anabata ihe niile OEM iwu, dị nnọọ kpọtụrụ anyị na-enye m gị design.we ga-enye gị a ezi uche price na-emere sample maka gị ASAP.
Q4: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A4: Site T / T, Western Union, 30% nkwụnye ego tupu, itule 70% tupu Mbupu.
Q5: Kedu ka m ga-esi tinye iwu ahụ?
A5: Mbụ banye PI, ịkwụ ụgwọ nkwụnye ego, karịa na anyị ga-edozi mmepụta. Mgbe emechara mmepụta mkpa ị kwụọ ụgwọ nguzozi. N'ikpeazụ, anyị ga-ebuga ngwongwo ahụ.
Q6: Kedu mgbe m nwere ike nweta nhota ahụ?
A6: Anyị na-ekenyekarị gị n'ime awa 24 mgbe anyị nwetasịrị ajụjụ gị. Ọ bụrụ na ị dị ngwa ngwa iji nweta nkwupụta ahụ. Biko kpọọ anyị ma ọ bụ gwa anyị na mail gị, ka anyị wee buru ụzọ jụọ ajụjụ gị.
Nke gara aga: anyanwụ n'èzí ogige ìhè ụzọ stake iko igwe anaghị agba nchara LED waterproof patio yad ìhè
Osote: Igwe ọkụ anwụ na-adịghị mma Ip65, Igwe ọkụ na-efe efe nke anyanwụ na-enwu ọkụ
Ogige ọkụ edu anyanwụ odida obodo ọkụ spike...
10W 3000K Ime ime n'èzí IP65 Waterproof Wall L...
Okirikiri Ọkụ na-enwu Satin Black Cast Spot Light...